FURSADO SHAQO MADAX BANNAAN OO AY KUU HEYSO AQALKA Real Estate -News and information about Somalia
Home Warkii FURSADO SHAQO MADAX BANNAAN OO AY KUU HEYSO AQALKA Real Estate
KA FAA’IIDEYSO FURSADO SHAQO GAAR KUU AH KANA BANNAAN Real Estate.
Dunida maanta aynu joogno Horumarka Tiknolojiyadda casriga ah oo noqotay mid ay Ummaddaha caalamka ku tartamayaan ayaa Shirkada aqalka.com waxa ay noqotay mida kaliya ee sida ugu fudud kuugu suurtagelin karta in aad ka hesho adeegyo ay ka mid yihiin Ka Iibsashada guryo ku cajabiya kuna yaal adduunka gaar ahaan dalkaaga Hooyo ee Soomaaliya iyo dalal badan oo ay wakiilo ku leedahay shirkadda.
Sidoo kale ku soo bandhigashada hantida ma guurtada ah ee aad dooneyso in aad Iibgeyso sida, Dhulalka bannaan, guryaha dhisan, Beeraha, Warshadaha iyo waxyaabaha kale ee aad iibka u rabto, kuwaasoo shirkadda ay kuu sahlayso in si fudud lagaaga iibsado hantida ma guurtada aad doonayso in aad iibiso.
Kireysashada guryaha ayaa ka mid ah fursadaha kale ee ay kuu heyso shabakadda caalamiga ah ee aqalka.com.
Haddaba ma dooneysaa in aad ka mid noqoto wakiiladda aqalka.com…?. Ma tahay dalaal Soomaaliyeed oo caqabad ka heysatay iibgeynta hantida laguu wakiishay in aad soo iibiso ama iibgeyso muddo kooban gudaheed…?.
Ma dooneysaa in adeegyada suuqgeyntaada aad hormariso…?.
Ma dooneysaa inaad hesho dad badan oo macaamil kuu noqda si suuqaaga u noqdo mid meel walba gaara…?.
Ma dooneysaa in aad hesho dalabyo iibsasho, iibgeyn, kireyn guryo casri ah oo ku yaala dalal badan sida Soomaaliya, Turkiga, Ingiriiska, Norway iyo wadamo kale oo markii hore ay kugu adkeyd in aad xirriirkooda hesho…?.
Haddii dhammaan su’aalahaas iyo kuwo kale oo fara badan ay qalbigaaga ka dhexguuxayaan waxaa kuu heysa shirkadda aqalka.com oo hab online-ka casriga ah meelo badan oo caalamka ka mid ah kugu suuqgeynaysa hantiyada maguurtada aad wakiilka ka tahay ama aad suuqa ugu jirto in aad macaamilkaaga usoo iibiso.
Ugu danbeyntii shabakadda aqalka.com oo in muddo ahi soo shaqeyneysay waxaa gacanta ku haya quburo aqoon dheeraad ah u leh howlaha ay hayaan, Aaminaad lagu kalsoonaan karo 100% iyo shaqooyin joogto ah waana tan keentay inay noqoto marin casri ah oo si fudud looga helo noocyo kala duwan guryo iib ah iyo kuwo la kireeyo oo ku yaala dalalka aan kor ku soo sheegnay iyo kuwo kaleeto oo fara badan.
Si aad wakiiladda bahda aqalka.com uga mid noqoto adigoo fursadan caalamiga ah ee aan kuu heyno ka faa’iideysanaya waxaad nagala soo xirriirtaa ciwaanadda iyo taleefanadda hoos ku xusan.
Nala Sooxiriir Qeybta whatsappka ama emailka Whatsapp ka +442035297844 [email protected] TEL00 442035297844
Previous articleXOG: Geneal Cabdalla Cabdalla Oo Kashifay Baarista Qaraxii Gobolka Banaadir
Next articleDaawo Sawirada :-Golaha Wasiirrada oo ansixiyey heshiis ay kala saxiixdeen Turkiga iyo Somalia
Akhriso:-Soomaali Ku Guuleystay Doorasho Ka Dhacday Mareykanka